Ritra hatramin’ny ranomaso… | NewsMada
Ritra hatramin’ny ranomaso…
Ritra e! Maina tanteraka… Ny eto Antananarivo aza mitaraina amin’ny faharitran’ny rano, mainka fa ny any ambanivohitra mitaintaina amin’ny ketsa? Fa dia io iaraha-miaina io ny zava-misy: ritra ny renirano, ritra ny dobo, makina ny tanimbary… Na ny ranomaso tokony halatsaka aza, ritra.
Eny, ankavitsiana sisa ireo mbola mahita zavatra tsara miseho eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ny ankamaroan’ny vahoaka, efa miraviravy tanana. Mitomany tsy misy ranomaso. Mimenomenona, maina molotra. Te hitroatra fa tsy afaka. Te hanohitra fa tsy mahetsika.
Dia tena izany marina tokoa ve? Tsy misy azo hatao intsony tokoa, sa tsy manam-piniavana intsony? Raha nampiova zavatra ny menomenona, hatezerana, ompa variraraka,sns, izay hataon’ny tsirairay anatin’ireny tambajotran-tserasera sy eny an-dalambe rehetra eny, efa tsy toa izao no zava-nisy teto. Saingy mijanona ho fahasosorana fotsiny ihany izany. Aretim-po ho an’ny tena fa tsy misy tena mazoto hanao hetsika intsony. Miandry izay higadonany e! “Tsy ampy ny rotsak’orana”, hoy ny Jirama dia tsy maintsy iainana ny delestazy. Dia lasa ny menomenona sy ny ompa, fa sady miaritra ihany. Izay tsy mahatanty mitomany, raha mbola misy ranomaso tsy ritra. Miangavy mafy ireo mbola mahavita, mba handatsahana orana artifisialy indray aloha, hanavotana izay azo havotana. Vahaolana ihany izay, saingy toa tsy maharitra no tsy dia mampazoto ny fitondrana ihany koa.
Sao mba manana vahaolana ihany ny mpitondra? Ankoatra ny mampiaka-bavaka, sao mba misy azon’ny tsirairay hatao ihany? Sao kosa mba tokony hanambatra ny hery kely sisa tavela, hoentina mitroatra, ka izay hironany any dia hidabohany? Asa re…